Kiiska Caa’isha: Sida baaritaanka hidda-sidaha DNA loo adeegsaday | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Kiiska Caa’isha: Sida baaritaanka hidda-sidaha DNA loo adeegsaday
Kiiska Caa’isha: Sida baaritaanka hidda-sidaha DNA loo adeegsaday
(Garoowe) 11 Feb 2020 – Labo qof oo maxkamad ay ku heshay kufsi iyo dil loo geystay Caa’isha Ilyaas ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee dowlad-goboleedka Puntland. Qof seddaxaad oo la xukumay ayaan la dilin.
Seddaxdaas qof waxay ka mid ahaayeen dad badan oo loo xiray kiiskii kufsiga iyo dilka Caa’isha Ilyaas oo 12 sano jir ahayd. Arrintaas oo ka dhacday Gaalkacyo, dhammaadkii bishii February, ayaa abuurtay xanaaq iyo isu soo baxyo ka dhacay qeybo ka mid ah dalka.
Baaritaanka iyo cadeynta la uruuriyay waxaa qeyb ka ahayd xarunta baaritaanka hidda-sidaha ee Garoowe, halkaas oo lagu baaray dhammaan eedeysanayaashii markii hore la xiray.
Hay’adda ayaa baaritaan ku sameysay sida uu falkaasi u dhacay iyadoo adeegsaneysay baaritaan lagu sameeyay raggii la eedeeyay iyo jirka Caaisha Ilyaas.
Hay’adda ayaa laantaa sirdoonka Puntland ay weydiisatay in ay baaraan falkaas iyagoo adeegsanaya qalabka casriga ah ee ay haystaan.
“Waxaan ka codsanay in la xafido meeshii maydka laga helay waxayna inoo sheegeen in la qaaday”, ayuu yiri gudoomiyaha xarunta DNA-ga lagu baaaro ee Garoowe, Cabdirashid Maxamed Shire oo BBC Somali la hadlay Bishii May ee 2019-kii.
Cadeynta ay hay’addan soo bandhigtay waxaa la horgeeyay maxkamadda oo xukunkeeda ku saleysay arrintaas. Labadii racfaan ee ay qaateen qareennadii u doodayay raggii la eedeynayay, ayaa sidoo kale la hor dhigay caddeynta ka soo baxday baaritaanka hidda-sidaha.
Madaxa hay’adda Baaritaanka hidda-sidaha ayaa BBC Somali u sheegay: “Waxaan weydiisanay in maydka la geliyo qaboojiyaha oo aan la dhaqin, qofna uusan taabanin.”
Waxay dhaqaatiirta ka safreen magaalada Garoowe si ay Maydka oo Gaalkacyo yaalay uga soo qaataan baaritaannadii loo baahnaa.
Waxyaabaha la baaray waxaa ka mid ahaa qofkii taabtay jirka Caa’isha iyo hidda-sidayaal kale. Wuxuu baaritaanka bilowday 25-kii bishii Febraayo. Tijaabooyiinkii laga qaaday ayaana loo gudbiyay xarunta Garoowe oo baaritaanka lagu sameeyay.
“Waxaan runtii ka qaadnay saambalo aad u badnaa. Qaar waxaan ka qaadnay qeybteeda gaarka u ah. waxaan kaloo tijaabo ka qaadnay qeybo muhiim ah, waxaa ka mid ahaa timeheedii, cidiyeheedii iyo qeybo ka mid ah jirkeeda oo dhaawacyo ay ku yaalleen”, ayuu yiri Cabdirashid.
Sidoo kale waxaa DNA laga baaray dharkii ay xirneyd Caa’isha markii kufsiga iyo dilka loo geysanayay.
Baaritaanka raggii la eedeeyay
Waxaa baaritaan lagu sameeyay raggii lagu eedeeyay in ay kufsadeen Caa’isha ka dibna dilka u geystay.
“Wax macno ah ma sameynayo haddii aadan haysan saambaladii aad soo qaaday wax la barbardhigo”, ayuu yiri madaxa hay’adda baaritaanka sameysay.
Maxkamad dil ku xukuntay qaar kamid ah raggii loo haystay kiiskii Caasho Ilyaas
Sida lagu xusay gebagebadii baaritaanka, ragga qaar ee la eedeeyay waxaa la sheegay in ay isticmaaleen xirfado ay isku deyeen in ay kaga baxsadaan baaritaanka hidda-sidaha (DNA-ga)
Dhaqtarka ayaa sheegay in tijaabadii lagu sameeyay xubinta taranka ee gabadha in ragga qaar ee kufsiga geystay, laga heli karo unugyada wixii ka soo baxay ah.
“Wax yaaabaha cajiibka ah ee inoo soo baxay waxa ay ahaayeen in dhecaan ragga ka yimid inaan meesha laga helin. Taas waxay cadeyneysaa in dadkii geystay kufsiga ay ka taxadareen oo ay is yiraahdeen isticmaala cinjirada la gashdo,” ayuu BBC Somali u sheegay Cabdirashid Maxamed Shire.
Balse baaritaanka ayaa lagu sameeyay tijaabooyiinkii kale ee laga qaaday cidiyaheeda iyo jirkeeda.
Cabdirashid, gudoomiyaha hay’adda baaritaanka Hidda-sidaha (DNA), ayaa sheegay: “Nasiib wanaag waxaan haysanaa meelo kale oo fiican oo aan isticmaali karno. Waxaad ogataa in gabarkasto oo dhibaaato loo geysanayo ay dagaallameyso oo ay iska celineyso ninka dhibka u geysanaya”.
Wuxuu tilmaamay in dagaalkaaas uu faaa’iido leeyahay, lana helaayo waxyaaabo muhiim u ah baaritaanka lagu sameynayo kufsiga.
Previous articleDAAWO: Aabbe Ilyaas miyuu cafinayaa wiilka harsan mise? Kelmado dhexmaray isaga iyo wiilasha la toogtey tiirka kahor & xog dheeraad ah
Next articleMa tahay in la mideeyo waxbarashada dalka, maxaase looga gol leeyahay mideyntaas?